Ndithumela ii-AirTags, iMacOS Big Sur 11.3 ngokusemthethweni, nokunye okuninzi. Eyona veki ilungileyo ndivela kuyo iMac | Ndisuka mac
Ndithumela ii-AirTags, iMacOS Big Sur 11.3 ngokusemthethweni, nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Ngaphandle kwamathandabuzo le ibiyiveki ebalulekileyo yabasebenzisi beApple kunye neApple uqobo, ukufika kwe Ii-AirTags, ukuqala kokubhuka kwe-iPad Pro, iMac engama-24 intshi kunye ne-Apple TV 4K ngokungathandabuzekiyo zezona ndaba zibalaseleyo kule veki.
Umboni ukuba sinezinye iindaba ezininzi kwiwebhu kodwa ikakhulu abasebenzisi bebejolise kwi-100 × 100 ngokufika kweemveliso zabo kunye nokubhukishwa kwabanye. Sibe nayo Iziphumo zemali ze-Apple ezinerekhodi yenzuzo yembali kwaye ngaphezulu, sabelana nawe ngezinye zeendaba zingezantsi.
Ii-AirTags. Alithandabuzeki elokuba isixhobo ondixelele ngaso kule veki kwindawo ka-Apple, kuyo ndivela eMac nakulo lonke usasazo. Kule veki inkampani yaseCupertino iqale ukuhambisa ii-AirTags kubasebenzisi bokuqala abathenga ngexesha lokubhukisha kunye nabo bangaboniyo ukuthunyelwa kuyaqhubeka ukuqokelela ulibaziseko. Kwezinye iiVenkile zeApple kukho isitokhwe, kodwa umba wokuhambisa uyinkimbinkimbi.
Izisa iindaba ezibalaseleyo kule veki ibe ziinguqulelo ezisemthethweni zeenkqubo ezahlukeneyo zokusebenza zabo bonke abasebenzisi abakhutshwe yiApple. Ngale ndlela uku Inguqulelo yeMacOS Bic Sur 11.3 yokugqibela yongeza uthotho lwezinto ezinomdla kodwa ngaphezulu kwako konke ilungisa into ebalulekileyo kwezokhuseleko Sicebisa ukuba uhlaziye ngokukhawuleza.
Ku-Apple azikho kwaphela kwaye ngelixa uninzi lwethu lucinga ukuba i-M1 inokuhlala nathi kulo nyaka ubuncinci, Umzi weCupertino ngewube uqalile ukuvelisa iM2 entsha Ngokukhawuleza. Ngokukahemuhemu kubonakala ngathi Ekupheleni kwalo nyaka sinokuba neprosesa entsha kwezinye iiMacs, siza kubona ukuba kwenzeka ntoni.
Ukugqiba sifuna ukwabelana nathi sonke ngamanani erekhodi ifunyenwe yinkampani yeCupertino kule kota yokugqibela yezemali. Kubonakala ngathi iApple isapakishwe kule nto ixesha kwaye kula manani iiMacs ezintsha zinento yokwenza nayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ndithumela ii-AirTags, iMacOS Big Sur 11.3 ngokusemthethweni, nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Ukuba ufuna ukusebenzela iApple, jonga iwebhusayithi yabo entsha
Iintsuku zokugqibela zePtlomey Grey miniseries ezenzelwe iApple TV + igqityiwe